Daawo Naag Ninkeeda Xubinta Taranka Ka Jartay Kadibna Weelka Qashinka Ku Ridaysa
Dhacdo argagax iyo naxdin leh ayaa ka dhacday wadanka Mareykanka kadib markii ay ninkeeda ka jartay xubinta taranka kadiban ay ku tuurtay xubintii meel qashinka lagu rido.
nasro on June 16 2013 ·
Read More · 1841 Reads
Daawo Muuqaalka: Naag Marqaansan Oo Aroos Qaribtay
Waxaan halkaan idin kugu soo bandhigaynaa muuqaal cajiib ah oo aad si weyn ula yaabi doontaan markaad aragtaan.
Read More · 1815 Reads
Muuqaal Qosol Badan Oo Markaad Daawato Aadan Ka Dhargayn, 10 Jeer Iyo Ka Badan Ayaad Ku Ceshanaysaa
Rag meeshaan ah maxaa kala haysta? majaajilo aan halkaan idin kugu haynaa ayaa ah mid shactiro badan oo markaad daawaatan aad qosol la ilmeynaysaan
Read More · 2973 Reads
HEESAAGA K'NAAN OO WADO QORSHE UU KU SAMEYNAYO FILM KA HADLAYA SOMALIA OO..
Heesaaga caanka ah ee reer Canada asal
ahaantiisuna yahay Soomaaliya ayaa waxa uu
Soomaaliya ku sameynayaa Film caalami oo ka
hadlaayo Soomaaliya iyo dhibaatootinkeeda,
Filmkaan ayaa waxa loogu magac daray Maano. Knaan ayaa markasta waxa uu ka hadli jiray
Read More · 1041 Reads
SHAHRUKHAN OO QALIIN GARABKA LOOGA SAMEEYAY KADIB MARKII....
actarka caanka ah ee Shah Rukh Khan ayaa qaliin mudo sedex saac ku dhawaad socday looga sameeyey garabka Isbitaalka Lilavati
Read More · 1293 Reads
BAYAANKA URURKA DHAQ-DHAQAAQA SOMAALIYEED.
Ururka Dhaq-dhaqaaqa Somaaliyeed Nabada,midnimadda iyo
Cadaaladda codka inta damiirka nool,dareen wadaniyadeed
iyo karaamadda ummadeed leh,waxaanu halkan ku soo gudbin
doonaa bayaanka ururka ee xaaladda dalkeena ka jiran iyo
aragtidda aanu ka aqbo,anagoo ka duuleeyna masuuliyadda
qarameed,damiir iyo akhlaaqeedba.
nasro on June 15 2013 ·
Read More · 151 Reads
Deg Deg:- Egypt Air oo ku socotay New York ayaa diyaaradaha dagaalka la daba dhigay laguna dajiyay Prestwick Airport kadib markii ...
Egypt air oo u socotay New York ayaa la daba dhigay laba Tayphoon kuwaasoo ah diyaaradaha dagaalka isla markaana lagu amray in ay ku degato dalka Ingiriiska Prestwick Airport.
Diyaarada ayaa siday in ka baday 300 oo qofood oo rakaab ah sida ay warbaahinta sheegeen, waxaana lagu wadaa in qof qof loo wareysto si loo ogaado dadka ka dambeeyay waraaq laga dhex helay musqusha oo ay ku qorneyd in diyaarada la gubi doono.
samira on June 15 2013 ·
Read More · 1746 Reads
Read More · 1361 Reads
War Deg Deg Ah Kulamo gaar gaar ah oo garabka Axmed Madoobe uga socdo Magaallada Kismaayo (Warbixin Muhiim ah)
Waxaa Magaallada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, xiligaani ka socda Kulamo u dhexeeya Mas�uuliyiinta Maamulka Jubbaland gaar ahaan garabka Axmed Madoobe.
Read More · 621 Reads
Qarax Khasaara geystay oo lala eegtay Masuuliyiin ka tirsan Dowlada Soomaaliya
Wararka naga soo gaaraya Degmada Wanlaweyn ee Gobalka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in Qarax qasaara geystay lala eegtay Mas�uuliyiin ka tirsan Maamulka Degmadda Wanlaweyn xilli ay halkaasi socdaal ku maraayen.
Read More · 361 Reads
Daawo Wiilkii Soomaaliga ahaa ee Dabaqa iska soo Tuuray Talyaaniga
Daawo maydka ale haw naxariistee marxuun guuleed maxamuud maxamed oo la sheegay inuu iska tuuray dabaqa 4aad oo ku yaal wadanka Talyaaniga kadib markii sida la sheegay loo diidey sharcigii degeneenshaha iyo kii shaqada.
Dabaqan uu iska soo tuuray marxuumku ayaa waxaa kula noolaa soomaali badan oo gaadheysey ilaa 150 ruux inkastoo ay Booliisku sheegeen inay baadhayaan sababta ninkan dabaqa isaga soo tuuray oo aysan ku qanacsanayn inuu isu soo tuuray sababo la xidhiidha bilaa sharci iyo shaqo la,aan balse ay ka shaki qabaan in dabaqa laga soo tuuray.
Read More · 2588 Reads
Page 14 of 812: 1...11121314151617...812
4,959,160 unique visits